စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: April 2007
နက်ဖြန်ခါ May Day ဆိုတော့ အလုပ်လည်းနားတယ်လေအလုပ်နားတော့ ယောင်လည် လည် နဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက်….အခန်းဘဲ သန့်ရှင်း ရေး လုပ်ရင်ကောင်းမလား… သန့်ရှင်းရေးတော့လုပ်ရတော့မှာသေချာနေတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းလုံးရုပ်ပွနေတာဘဲ….ရှင်းပြီးရင်တော့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့စဉ်းစားထားပါ တယ်။ ရုပ်ရှင်ကားတော့ မရွေးရသေးဘူး…. ကြည့်ချင်တဲ့ကားတွေကများနေတယ်လေ။ ဘယ်ကားကြည့်ရင်းကောင်းမလဲ စိုင်းစိုင်း…….ဆိုပြီး….စဉ်းစားနေတုံး…....ကလင်…. ကလင်.. …ဘီယာသွားသောက်ကြစို့လို့ ဖုန်းလာတယ်…..လစ်တော့မယ်..ဘိုင်ဘိုင်
Posted by Sai Sai at 9:04 PM0comments
ပြင်ဦးလွင်က ကန်တော်ကြီးကို အလည်ဝင်ရင်း လက်ကမြင်းကြောထ ပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေပါ..
Posted by Sai Sai at 8:07 PM0comments
ကျနော့် ဒိုင်ယာရီနဲ့ဝေးခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ ဒါတင်မကပါဘူး ပိုစ့်အသစ်တွေလည်းမတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ နောက်နောင်မှာ ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပါ။ ဆောရီးပါ…….
Posted by Sai Sai at 10:59 AM0comments